သဒင်းစုန် up news | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » သဒင်းစုန် up news
သဒင်းစုန် up news
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jun 5, 2013 in Aha! Jokes, Satire, Myanma News |9comments
အလဲဗင်း သတင်းစာတိုက်ပိုင် ထရပ်ကားများအား ရန်ကုန်-မန်းလေး အမြန်လမ်း ညဖက် အသုံးပြုခွင့် ပိတ်ပင် ရခြင်းမှာ လမ်းစည်းကမ်းအရဟု အကြောင်းပြလိုက်ပြီး ဆန္ဒရှိလျင် တိုက်ပိုင် လေကြောင်းလိုင်း တည်ထောင်ခွင့် ပေးမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ခရီးသည်နှင့် အခြားကုန်ပစ္စည်းများ သယ်ခွင့်မရှိ၍ ဖြန့်ချီရေးစရိတ် ကိုက်မကိုက် မသေချာကြောင်း ဝေဖန်နေဂျသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ဖြစ်ပွားသော အမှုကြီးဆယ်မျိုးအနက် မုဒိမ်းမှု လွန်စွာများပြားနေရာ ဂျော်လကီအောင်ပု ကဲ့သို့ နှစ်ဖက်ချွန်များကြောင့် (မုဒိမ်းကျင့်၊ မုဒိမ်းအကျင့်ခံရ) အမှုအရေအတွက် နှစ်ဆတိုးနေရကြောင်း စီအိုင်ဒီရဲမူး ရာမညမှ သုံးသပ်သည်။
လယ်ယာသုံးကျွဲနွား တရားမဝင် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှု နှိမ်နင်းလျက်ရှိသော စစ်ဆေးရေး ဂိတ်များအား တဖက်နိုင်ငံ ဝယ်လိုအားများနေ၍ ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားကြောင်း နွားကုန်သည် မာမွတ်ခိုမ်ထံမှ သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့ အမေရိကန်စင်န်တာ ကျောင်းသားများနှင့် တာမွေ ဂျာမေဗလီ ဝတ်ပြုဆရာတို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း အမြင်ဂျင်း ဖလှယ်ကြရာ အစားအစာအကြောင်း အရောက်တွင် ဆွေးနွေးပွဲ ရပ်ဆိုင်းလိုက်ရဂျောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေသည်။
ရေကြောင်းထိန်းသိမ်းခြင်း အားနည်း၍ မြစ်ချောင်းများတွင် ရေချိုအရင်းအမြစ်များ ပျောက်ဆုံးသွားခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အီတွန့်ဗွမ်ကုမ္မဏီထုတ် ဆေးသကြားအိတ်များကို ကျွန်းသစ်လုံးများနှင့် အလဲလှယ်ပြုရန် မဟုတ်တရုတ် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် ကြေးမုံဂျီးမှ ကမ်းလှမ်းထားသည်။
မြစ်ချောင်းကမ်းပါးများ ရေတိုက်စားခံရခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ဝါးပင်များစိုက်၍ အကာကွယ် ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး အခွန်၊ စည်ပင်၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ ရဲ၊ ကညန၊ သစ်တော အစရှိသော အစိုးရ ဌာနများကိုလည်း မြစ်ရိုးတလျောက် ဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ်ထားသည်။
မြန်မာ့မီးရထားတွင် အသုံးပြုရန် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ၏ စက်အရန်ပစ္စည်းများ အရည်အသွေးတိုးမြှင့်ရေး ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်၍ လှည်းဝင်ရိုး ပြုလုပ်သူများ အားတက်ဖွယ်ဖြစ်ကြာင်း အလုပ်ယုန် ဆွေးနွေးပွဲတခုတွင် ပြည်ဒေါင်ဇုဝမ်ကျီး ဦးဇေယျာကြောင်မှ အသိပေးခဲ့သည်။
ဇွန်လတရက်နေ့က မူးယစ်ရမ်းကား သောင်းဂျန်းခဲ့သူ ပျီဒေါင်ဇု စီးပွားကူးသန်းဝမ်ဂျီးသား ဇေယျာရွှေမြေ ဘောလုံးအသင်း ဂုံဒူးစောင် ဒုက္ခ သူရိန်ဆိုသူ မှားယွင်းကြောင်း လာရောက်တောင်းပန်မည်ဆို၍ နစ်နာသူ မိသားစုမှ စောင့်ဆိုင်းနေရာ သင်္ကန်းဝတ်ဖြင့် ကြွလာသဖြင့် ဝိုင်းဂမူကျွေးရန် ခေါ်ထားသော သဒင်းဒေါက်များပါ ကန်တော့ခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
ဒုတိယဗိုလ်ဂျုပ်ကျီး မြင့်စိုးမှ သီးခြားပြည်နယ် တောင်းဆိုနေသော ဝစစ်တပ်အား ချေမှုန်းရန် တပ်မဒေါ်တွင် ထုတ်ဖော် မပြောဆိုနိုင်သည့် လက်နက်ဆန်းများရှိဂျောင်း သဒင်းထောက်မျာအား အရိပ်အမြွက် ပြောဆိုခဲ့ရာ လောက်လေးခွ၊ ဂျင်ကလိ၊ ဝါးရင်းတုတ်၊ သားရေကွင်းတို့အား ရုရှားဗျံ စစ်အိမ်ကျယ်နီယာများဖြင့် စီမံကိန်းချ ဆောင်ရွက်နေခြင်း အတော်ခရီးပေါက်နေပြီဟု ယူဆဖွယ်ရာဖြစ်သည်။
သမဝါယမစနစ် မအောင်မြင်ရဂျင်းမှာ ယခင်လူများ မလုပ်တတ်သဖြင့်ဟု ဝံကျီးဦးကျော်ဆန်းမှ ပြစ်တင်လိုက်ပီး ယခုအခါ တရုတ်နိုင်ငံ ချေးငွေဖြင့် တောင်သူလယ်သမားများအား အတိုးနှုန်းသက်သာစွာ ငွေချေးရန် စီမံနေရာ သမဝါယမစနစ်အား သမနီတလစနစ်သို့ ပြောင်းလဲ ကျင့်သုံးတော့မည်ဟု မစားရဝခမန်း ပြောသွားသည်။
မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ သရုပ်ပြလေ့ကျင့်ပွဲမှ ဖြစ်ပွားသော မီးလောင်မှုအား ရပ်ကွက်နေ လူထုမှ ငြိမ်းသတ်ပေးလိုက်ရာ အစိုးရနှင့်ပြည်သူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း အရှိန်အဟုန် ရနေပြီဟု နိုင်ငံဒေါ်သမဒရုံးမှ ကြွားဝါလိုက်သည်။
သဂျီးသာမီးလေးအား ယခုနှစ်တွင် ရအောင်မကြံနိုင်ပါက ဥက္ကဌရာထူး နုတ်ထွက်မည်ဟု သွားရည်တမြားမြား ဦးကြောင်ကြီးမှ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သော်လည်း ၎င်း မည်သည့်အဖွဲ့တွင် ဥက္ကဌတာဝံ ယူထားသည်ကို ဖြေကြားရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ ကိုကာကိုလာ အချိုရည်ကုမ္မဏီမှ ဒေါ်လာသန်း၂၀၀ကျော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး အလုပ်အကိုင် နှစ်သောင်းကျော် ဖန်တီးပေးသွားမည့်အပေါ် အီတွန့်ဗွမ် အချဉ်ရည်စက်ရုံ တည်ဆောက်ကာ နှစ်စဉ် လူနှစ်သန်းကျော်အား အချဉ်ဖမ်းသွားမည်ဟု အားကျမခံ တရုတ်ကူမြူနစ်ပါတီ ပေါလစ်ဗြူရိုအဖွဲ့ဝင် ကြေးမုံဂျီးမှ အားကျမခံ တုံ့ပြန်လိုက်သည်။
တရုတ်အစိုးရ၏ ၎င်းတို့အနေဖြင့် မြန်မာတို့ဆီက မေတ္တာသာလိုချင်ကြောင်း ပြောဆိုချက်အပေါ် မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှ ကြိုဆိုလိုက်ပြီး လူရွှင်တော်မေတ္တာမှ တန်ရာတန်ဂျေးပေးလျင် ရမည်ဟု ပြောဆိုသည်။ နိုင်ငံတကာ လူမှောင်ခိုတိုက်ဖျက်ရေး အဖွဲ့ဂျီးကမူ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို စောင့်ကြည့်နေဂျောင်းဆိုသည်။
၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များအား တရုတ်ပြည်သို့ ဖိတ်ကြားပြီးနောက် မုံရွာ လက်ပံတောင်း ကြေးနီတောင် ဆန္ဒပြပွဲအား လုံထိန်းရဲများမှ ရိုက်နှက်ဖြိုခွင်းမှုတွင် တရုတ်နိုင်ငံ ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဆိုခြင်း အဓိပါယ်မရှိဂျောင်း တရုတ် ရဲတပ်ဖွဲ့ အကြီးအကဲ ဂက်စ်တာပို ကြေးမုံဂျီး (ခ) အီတွန့်ဗွမ်မှ ငြင်းဆိုခဲ့သည်။
လက်ပံတောင်းဖြိုခွင်းမှု တရုတ်ရဲနှင့် မဆိုင်ပါ (ဓါတ်ပုံ – Umar Farooq FB)
အမေရိကန်အစိုးရမှ လွှဲပြောင်းပေးမည့် ဆီစားသက်သာသည့် စစ်လေယဉ်၊ စစ်သင်္ဘောများအား စစ်ရုံးချုပ်မှ ငြင်းပယ်လိုက်သည့် အဓိက အကြောင်းအရင်းမှာ ဆီမှောင်ခိုထုတ် ရပ်တည်နေသော မြန်မာ့လေတပ်၊ ရေတပ် သဘာဝနှင့် မကိုက်ညီ၍ဟု အပတ်စဉ်ထုတ် ဂျိမ်းစ်စစ်ရေးဂျာနယ်တွင် စွပ်စွဲထားသည်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၀၀ကျော် ထောင်ထဲဆက်လက် ကျန်ရှိနေခြင်းမှာ ခေတ်အဆက်ဆက်က ရာဇဝတ်မှုနှင့် နိုင်ငံရေးပြစ်မှု ရောထွေးနေသဖြင့်ဟု ယခင် စစ်အစိုးရလက်ထက် စစ်ထောက်ချုပ်၊ အတွင်းရေးမှူး ၊ ဝန်ဂျီးချုပ် တာဝန်များ ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ဗိုလ်ဂျုပ်ကျီးဟောင်း လက်ရှိ သမဒဂျီး ဦးသိန်းစိန်မှ မိန့်ကြားသွားသည်။
ဒီမိုကရေစီ လမ်းဂျောင်းမှ နောက်ပြန်လှည့် သွားမည်မဟုတ်ဟု ကာဂျုပ် ဗိုလ်ဂျုပ်မူးဂျီး မင်းအောင်လှိုင်မှ ဗြိတိန် ကာချုပ်အား ညစာစားပွဲတွင် ဂဏန်းဟင်းလျာဖြင့် ဧည့်ခံစဉ် ပြောကြားလိုက်ခြင်းသည် ရှေ့လျောက် ဘေးတိုက် သွားမည့်သဘောဟု ပရော်ဖက်ဆာ ဆိတ်ဖွား နေရာဆက်ခံသူ အယူတော်မင်္ဂလာ ဦးသိုးမှ နမိတ်ဖတ်သည်။
5.6.2013 မန်းတလေး သတင်းစဉ်
ယနေ့နံနက် ၁၁နာရီ ခွဲ အချိန်ခန့် တွင် ၊ မန်းတလေးဂေဇက်မှ မောင်ပေ ဆိုသူသည် ၊ မန်းတလေး မြို့၃၅ လမ်း အတိုင်း အရှေ့ မှ အနောက် သို့ဆင်းလာစဉ် ၊ ၇၆လမ်း ကီးမား တင်ဝင်း ဆိုင် အနား တွင် ၊ ရဲ တပ်ဖွဲ့ ဝင် များ ယူနီဖောင်း အပြည့် ၊ သေနတ် များဖြင့် ၊ မှန်းခြေ အ ယောက် ၂၀ ခန့်စောင့်နေသည် ကို တွေ့ မြင် ခဲ့ ရ သည် ။
သို့ နှင့် ၊ မည် သို့ မည် ပုံ ကြောင့် စောင့် နေ သ နည်း ကို ဆက် လက် စုံ စမ်း ကြည့် သော အခါ
မန်း တ လေး မြို့ သစ် ဘက် တွင်
စာ သင် ကျောင်း တစ် ကျောင်း နှိုက် ၊ ကျောင်း တက် လာ သူ က လေး တစ် ယောက် အား ကု လား တစ် ကောင် မှ ဖမ်း သည့် အ ခါ တွင် ၊ ထို ရပ် ကွက် ရှိ မြန် မာ များ က ဝိုင်း ဝန်း တား ဆီး ရာ မှ စ သည် ဟု သိ ရ သည် ။ ( နီး စပ် ရာ ဖုန်း သ တင်း ဖြစ် သ ဖြင့် အ မှား ၁၀ % ရှိ ကောင်း ရှိ နိုင် ပါ သည် )
နေ့ လည် ၁ နာ ရီ ခန့်တွင် ၊ သ တင်း ဆက် လက် ထောက် ရာ ၊ စက် မှု ဇုံ နှိုက် လဲ ရိုက် ပွဲ များ ဖြစ် နေ ပြီ ဟု သိ ရှိ ရ ပါ သည် ။
မန်း တ လေး သ တင်း စဉ် များ ကို အီ တွင် ရပ် နား ပါ ဦး မည်
တန်း တန့်တန် တန့်ဒန်
သွားရည်တမြားမြား ဦးကြောင်ကြီးရဲ့ စုံစီနဖာ သတင်းစုန်ကိုဖတ်ပြီး…
အင်တာတိန်းမန့် သတင်းများ ဆိုပီး ခေါင်းစဉ်ပြောင်းဂျင်ထှာ….ေိေိ
သတင်း http://www.first-11.com မှ
“တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းတွေ ထုတ်ပြန်မယ် ဆိုလို့ရှိရင် စနေနေ့နဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့လို ပိတ်ရက်မျိုးတွေမှာ ထုတ်လေ့ရှိတယ်၊
အဲဒီနေ့တွေမှာမှ ရက်ကောင်းရက်သာရွေးပြီး အများအားဖြင့်တော့ ရက်ရာဇာ ကျတဲ့နေ့မှာ ထုတ်ပြန်လေ့ ရှိပါတယ်”
ဟု ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ ပြည်ထောင်စု ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးအေးကြူမှ ပြောကြားသည်။
အတော် အမျှော်အမြင်ကြီးတဲ့ ဝန်ကြီး၊ စေတနာကောင်းတဲ့ ဝန်ကြီးဘဲ။
စာမေးပွဲ စစ်ရင်လဲ ရက်ရာဇာနေ့တွေမှာ မှ ရွေးစစ်ပေးပါတော့ လား။
ရက်ရာဇာ နေ့ တွေ က ကလေး တွေ ပညာရေး နဲ့ ဘဝ ကို ပံ့ပိုးပေးတယ်တဲ့လား ဆရာရယ်။
တစ်သက်လုံး သင်သမျှ ရေးပေးသမျှပဲ ဖြေရ၊ဖတ်ပြလာတတ်တဲ့ သူတွေဆိုတော့
ဒီမိုခေတ်ဦး တကယ် တေ့တေ့ဆိုင်ဆိုင် အင်တာဗျူးတို့ အမေးတို့မှာ ။။.
၁) မဖြေရဲ (အရင်က အဖြေမှားရင် ပြန်ရောက်ရင် ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးအကျင့်ပါလာတော့)
၂) ကိုယ့်ဟာကိုယ့် ဖြေကြတော့ တောက်တလွဲ (မေးတာတစ်ခု ဝေ့လည်လည် ဖြေသွားတာက တခြား)
၃) တတ်တိနည်းနည်းကောင်းတယ်ဆိုပြီး စွတ်ပြောတဲ့ လူမျိုးကျ စိတ်ထဲက ဖူးလစ်(ရှ) တွေ ရပ်ဘစ်(ရှ) တွေ ပေါ်လာရော (ချက်မကျ လက်မကျတွေ/ မဟုတ်မဟတ်တွေ)
ကျမတို့ ရွာဝန်းကျင်မှာ ကရင်ရွာတွေရှိတယ်။ သူတို့ကခင်ဖို့ကောင်းပြီးရိုးသားပွင့်လင်းကြတယ်။ တနေ့မှာမေမေတို့ အလာပ သလာပ ပြောနေတုန်း သီလရင်တစ်ပါးကပြောတယ် -ဘုရားသခင်ပေးထားတာ အကုန်နေ့ကောင်းရက်မြတ်တွေကြီးပဲ။နင်တို့ကြမှ ပြသာဒါးဖြစ်တော့တယ်တဲ့။
​တရား​တော်​ပါအတိုင်​ ​ကောင်းတာလုပ်​တဲ့​နေ့ဟာ ​နေ့​ကောင်းဖြစ်​ပြီ၊မ​ကောင်းတာလုပ်​တဲ့​နေ့ဟာ
ကို​ကြောင်​ကြီးရဲ့ သဒင်းစုန်​ ကိုဖတ်​ရှု ရယ်​​မော